[Madaxweyne Muuse B.]:-"Dacwadda Waxaanu Geyney Halkii La Geyn-lahaaba Haddey ICAO Iyo UN-ta", Xukuumadda Somaliland Oo Dacwad Hawada Ka Dhan Ah Ka Gudbisay Dawladda Soomaaliya
Wednesday April 11, 2018 - 14:58:41 in Wararka by Abdi A.
Hargeysa-(Caalami-News)-Wareysi uu madaxweyne Muuse Biixi siiyey telefiishanka Universal ayaa uu ku sheegey in dawladda Somaliland dacwad ka dhank ah dawladda Somaliya ka gudbisey hay'adda ICAO ee maamusha hawada Somaliland.
Dawladda Somaliland ayaa sheegtay in dacwad ay u gudbisay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan hawada ee ICAO.
Madaxwaynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo wareysi gaar ah siiyey telefiishanka Universal ayaa in dacwad ay kaga codsanayaan Qaramada Midoobay heshiiska ku wareejinta hawada Soomaaliya ee sannadkan badhtankiisa la filaayo in uu dhaco ay kaga noqoto.
Madaxwayne Muuse Biixi waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha dibada Somaliland u qaabisal Sacad Cali Shire oo hadda ku sugan magaalada Nayroobi uu Qaramada Midoobay u direy baaq ay ku joojinayso heshiiskaasi.
Madaxwaynaha Somaliland waxa uu ku adkaystay in hawada Somaliland laga maamuli karin dalka Soomaaliya oo uu sheegay in ay ka go’een.
Dhanka kale dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay dhawaan in ay la wareegtay maamulka hawada oo ay hore gacanta ugu hayn jirtay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan hawada ee ICAO.
Ugu danbeyntiina dawladda Somaliland waxay sheegtay in heshiisyo ay kala saxeexdeen xukuumaddii hore ee uu hoggaaminaayey madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud bal se dawladda Farmaajo ay ka baxday heshiisyadaasi taasina ay tahay arrin laga xumaado.